Fitaovana siansa - BALLYA
Fitaovana siansa amin'ny fikarohana sy famokarana siantifika
PCR tena izy
PCR amin'ny fotoana tena izy dia ny fahitana ny fotoana tena izy amin'ny fizotran'ny PCR amin'ny alàlan'ny famantarana fluorescent mandritra ny fizotran'ny fanamafisana PCR.
Mpanala asidra nokleika
The mpitrandraka asidra niokleika afaka mamoaka asidra niokrika tanteraka amin'ny sehatry ny fampiharana isan-karazany
vata fampangatsiahana ultra-flow
Vata fampangatsiahana ambany indrindra amidy, mari-pana ambany -10C ka -156C, kalitao avo amin'ny vidin'ny orinasa. Ampiasaina be amin'ny fikarohana siansa fiainana, fitehirizam-bokatra covid19.
Inona no atao hoe siansa?
Ny teny hoe "fitaovana siantifika" dia mandrakotra sehatry ny fampiharana maro manomboka amin'ny teknika mikraoskaopy izay mampiasa fomba beamline ka hatramin'ny teknolojia fanodinana laboratoara isan-karazany. Amin'ireto sehatra ireto, ny rafitra fametrahana ny mari-pahaizana piezoelektrika dia be mpampiasa, ary nilalao andraikitra lehibe teo ambanin'ny fepetra fampiasana. Ny rafitra mihetsika mifanila dia mety amin'ny vahaolana mihetsika amin'ny axis multi. Miaraka amin'ny fanampian'ireto rafitra ireto, na ny enta-mavesatra milanja taonina maro aza dia azo zahana miaraka amin'ny marim-pototra ny haavon'ny micron.
Fitaovana momba ny siansa
Ny habe, ny endrika, ny tanjona, ny fahasarotana sy ny fahasarotan'ny fitaovana siantifika dia miovaova be. Anisan'izany ny fitaovana laboratoara somary tsotra, toy ny mizana, mpitondra, famantaranandro astronomia, thermometre, sns. Na izany aza, ny refin'ny fitaovam-pianarana siantifika sasany dia mety ho lehibe kokoa ary be pitsiny kokoa, toy ny mpanangona sombin-javatra na antennas telescope radio. Mifanohitra amin'izany, ny teknolojia mizana sy mizana nano dia miroso mankany amin'ny miniaturization ny haben'ny fitaovana, ao anatin'izany ny fitaovana fandidiana nano, ny robot bio-nano ary ny bio-electronics.
Ireo karazana fitaovana fampitaovana siansa
Amin'ny fananganana ny National Science and Technology Basic Condition Platform, ny fitaovana siantifika sy ny kojakoja ilaina amin'ny fitaovana dia mizara ho fitaovana fandinihana, fitaovana fizahan-toetra fanatanjahan-tena, fitaovana fandrefesana, fitaovana fandrefesana elektronika, fitaovana an-dranomasina, fitaovana fikarohana tany, kojakoja hita amin'ny atmosfera, fitaovana astronomia, fitaovana diagnostika ara-pitsaboana, fitaovana nokleary, fitaovana fitsapana manokana, fitaovana fanandramana ary sokajy 11 hafa.
Fitaovana siansa ho an'ny sekoly ambaratonga voalohany
Ny fitaovan'ny siansa voalohany dia mizara ho sokajy manaraka ireto:
1. Fitaovana fandrefesana: (1) Varingarina fandrefesana (2) Fandanjana ny fako
2. Fitaovana fanasarahana akora: cornel
3. Fitaovana mafanafana: (1) Tube fantsom-pahavitrihana dao (2) Bikan-drano (3) tavoahangy mahazatra (4) lovia etona (5) Voahosotra
4. Fitaovana fanamafisana: 1) Jiro toaka (2) Asbestos net
5. Fitaovana fitehirizana sy fihinanana akora: (1) Tavoahangy reagent (2) Tavoahangy mitete (3) Fantson-doha plastika (4) Sotro fanafody (5) tavoahangy fanangonana gazy
6. Fitaovana hafa: 1) fijoroana vy, (2) rihitra
Fampivoarana ny fitaovana siantifika
Ny fampiroboroboana ny fitaovana sy fitaovana siantifika dia misy fifehezana maro sy haitao mandroso. Ny halavan'ny fampandrosoana ny vokatra dia lava ary lava kokoa ny tsingerin'ny tsenan'ny famokarana vokatra. Renivohitra lehibe no ilaina. Ankoatr'izay, ny fampivoarana ny fitaovana siantifika dia mifandray akaiky amin'ny haavon'ny fikarohana siantifika. Noho izany, tsy azontsika antenaina fa ny indostrian'ny fitaovana siantifika ao Shina dia afaka manatratra tanteraka na mihoatra ny haavon'ny famokarana fitaovana iraisam-pirenena ao anatin'ny fotoana fohy, fa afaka manome laharam-pahamehana ny fampandrosoana ny vokatra ara-tsiansa misy ny toetra sinoa ary mety amin'ny filan'ny tsena sinoa hialana amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa iraisam-pirenena. Fifaninanana mivantana.
1. Mampiasà loharanon-karena manokana hampivelarana fitaovana sy rafitra fandalinana an-tsaha manokana.
Ireo fitaovana siantifika ampiasaina amin'ny famokarana indostrialy sy fambolena, fiarovana ny tontolo iainana ary fiarovana ara-tsakafo eto amin'ny fireneko dia manana fototra iorenan'ny fikarohana sy fampandrosoana. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasa indostrialy dia mila manome serivisy eo an-toerana amin'ny famokarana fitaovana ara-tsiansa, fa ny ankamaroan'ny serivisy an-toerana omen'ny orinasa multinasional dia orinasam-panjakana. Noho izany, sarotra ho an'ny orinasa iraisam-pirenena ny mahazo ny tombom-barotra rehetra amin'ny rojom-bidy, izay manome vahana ho an'ireo orinasam-pamokarana fitaovana eto amin'ny fireneko. Ny indostrian'ny fitaovana siantifika any Shina dia afaka mifantoka amin'ny fampivoarana ny fitaovana fandalinana manokana amin'ny sehatra etsy ambony, ao anatin'izany ny fitaovam-pambolena sy ny sakafo manokana, ny famonoana bibikely sy ny residue, ny fandrefesana haingana ny tany ary ny fitaovana manokana momba ny fambolena sy ny sakafo, ny mpanara-maso ny tontolo iainana, ny siansa fiainana, arina mpikaroka fiarovana ny toeram-pitrandrahana, sns.
2. Mamolavola vokatra fitaovana siantifika avo lenta miaraka amin'ny fototra fikarohana sy fampandrosoana.
Araka ny fotodrafitrasa indostrialy misy ny fireneko ankehitriny, sarotra ny manamboatra spectrometatra avo lenta mifaninana, fa tsy ny sehatra rehetra mampiasa spectrometre marobe no mitaky fahatsapana sy vahaolana avo. Amin'ny sehatra manokana sasany, ny takiana amin'ny toetra an-tserasera, haingana, ary manokana dia tsara kokoa noho ireo ho an'ny tondro hafa. Ny famokarana spectrometre marobe toy izany dia tsy vitan'ny hoe mahafeno ny filan'ny mpampiasa fotsiny, fa misoroka ny fifaninanana mivantana amin'ireo orinasa iraisam-pirenena.
3. Manamafy ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny haitao manan-danja sy ny singa fototra amin'ny fampitaovana ankapobeny hamakafaka ny fahamendrehana sy ny fahamarinan-toerana.
Ny fihemoran'ny teknolojia manan-danja sy ny singa fototra no antony lehibe ao ambadiky ny fikaonan'ireo fitaovana sy fitaovana siantifika ao amin'ny fireneko taraiky ny an'ny firenena mandroso. Shina dia manana fototra iray amin'ny fikarohana sy fampivoarana ireo singa manan-danja amin'ny fitaovana spectroscopy sy ny fitaovana chromatographic, indrindra ny fitaovana spectroscopy izay natomboka teo am-piandohana, ny haben'ny localisation dia somary tsara, ary ny fitaovana marobe dia aondrana any ampitan-dranomasina, fa ny fahamendrehana sy ny fahamarinan-toerana dia nohatsaraina bebe kokoa. Manolo-kevitra ny hanamafisana ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny haitao manan-danja ary ny singa fototra amin'ireo karazana fitaovana fampitaovana ankapobeny ireo, hanatsara ny fahamarinan-toerana sy ny fahatokisana azy ary hametraka tahiry ho an'ny fanombanana ny fampiharana fitaovana.
4. R&D amin'ireo singa manan-danja ho an'ny fitaovana siantifika avo lenta.
Ny tinady ao an-trano amin'ny ankamaroan'ny vokatra fitaovana siantifika avo lenta dia kely dia kely, toy ny cascade habe amin'ny ambaratonga avo lenta sy spectrometre masirasira, mikraoskaopy elektronika avo lenta, andriamby nokleary matetika, sns., Miankina betsaka amin'ny importa izao hamaly ny fangatahana. Eo ambanin'ny fepetra fa tsy matotra ny fotoanan'ny teknolojia milina iray manontolo dia asaina manambola vola ianao mba hampivelarana ireo singa ilaina ilaina amin'ny vokatra fitaovana siantifika avo lenta, ary miandry ny fotoana hampivelarana ny masinina manontolo.
5. Manamafy ny fampandrosoana ny fenitry ny fampiharana ho an'ny fitaovana siantifika manokana.
6. Fanafainganana ny fampiroboroboana ny indostrian'ny serivisy fanamboarana fitaovana siantifika ary hamafiso ny fikarohana ny teknolojia ampiharina.
Ny indostrian'ny serivisy fanamboarana fitaovana siantifika dia misy: manome vahaolana ho an'ny mpampiasa mifanaraka amin'ny filan'ny tsena, manome serivisy lozisialy ary singa manohana sy azo ampiasaina amin'ny vokatra fitaovana siantifika. Ho an'ireo faritra ireo, nanolorana azy ho fanamafisana ny fananganana laboratoara fampiharana, hanafainganana ny fikarohana ny teknolojia ampiharina, hametraka rafitra varotra sy serivisy serivisy tanteraka, hanatsara ny tombam-bidin'ny vokatra ara-tsiansa siantifika ary hanatsara ny fifaninan'ny orinasa.
Orinasam-pitaovana siantifika sinoa 29 ambony
1 、 Thermo Fisher Scientific (Sina) Co., Ltd.
3 、 Shimadzu (Sina) Co., Ltd.
4 、 Focused Photonics (Hangzhou), Inc.
8 、 Jena Analytical Equipments (Beijing) Co., Ltd.
9 、 Malvern Panalytical (mifandraika amin'ny Shanghai Sibaiji Equipment System Co., Ltd.)
10 ECH TEKNOLOGIASA RANO- (SHANGHAI) voafetra
11 、 Mettler-Toledo International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
13 、 Horiba (Sina) Trading Co., Ltd.
15 、 INESA Holding Group
16 、 Jiangsu Skyray Equipment Co., Ltd.
17 ECH TEKNOLOGIASA RANO- (SHANGHAI) voafetra
19 、 Qingdao Laoying Environmental Technology Co., Ltd.
20 、 Oxford Equipments Technology (Shanghai) Co., Ltd.
21 、 Shanghai Ab Sciex Analytical Equipment Trading Co., Ltd.
22 、 Fitaovana Atsinanana sy Andrefana Analytical, Inc.
23 、 Beijing Labtech Equipment Co., Ltd.
24 、 Micromeritics Equipment (Shanghai) Ltd.
25 、 Suzhou Niumag Corporation
27 、 Shanghai Yiyao Equipment Technology Development Co., Ltd.
28 、 Dandong Bettersize Equipments Ltd.
29 、 Carl Zeiss Vision (Sina) Ltd.